Super Import Nights 2012 | MyanmarCarsDB - No 1 Car Marketplace/Classifieds Website in Myanmar
Home » News » Super Import Nights 2012
admin | News | May 28, 2012
ထို့အပြင် မကြာသေးခင်က ဟိုးလေးတကျော်ဖြစ်သွားတဲ့ စင်္ကာပူမှ Ferrari ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်မည်ထင်သည် – Ferrari ကားများ ၂စီးသာပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အများစု ပြိုင်ကားများကတော့ Lamborghini တွေပါပဲ။
2,454 total views, 1 today Print
3 Responses to “Super Import Nights 2012”
Kyaw Thein on May 28, 2012 @ 10:57 am Singapore နိုင်ငံက Super Inport Nights ကားပြပွဲလေးပါ.
Reply Sumo On on May 29, 2012 @ 4:46 pm yangon နဲ mandalay ပဲလုပ်တော.အဲဒီလိုမိူးပွဲတွေနယ်တွေမှာလဲ100အောက်နဲ.100ထက်ဆို၇င်လာခဲ.ပါအုးံ.
Reply Zar Niaung on June 27, 2012 @ 4:39 pm အင်းကားတွေကလန်းတယ်နော် ကြိုက်တယ်.
Toyota Hilux Surf	mitsubushi lancer evolution 8, 2000cc	Good Morning Everyone	price of 1300cc car	honda Insight	ယနေ့ လူကြည့်အများဆုံး ကားများRAV4(DIESEL INTERCOOLER TURBO) (25 views)toyota bB (24 views)mark2(19 views)mark II (92 ကြောင်မျက်လုံး) (13 views)Toyota mark22002 (13 views)COROLLA VAN (10 views)D MAX (Double Cub) (9 views)Nissan Skyline r324door (8 views)NISSAN AD VAN - VE အပြီးစီး ၁ဝ၅သိန်း (8 views)honda fit 2009 (8 views) © 2013 MyanmarCarsDB – No 1 Car Marketplace/Classifieds Website in Myanmar. All Rights Reserved.